मलाई रमेश खरेलको ‘एक्सन’ मनपर्छ -महेश बस्नेत, अध्यक्ष, युवा संघ नेपाल | EuropeNepal.Net
मलाई रमेश खरेलको ‘एक्सन’ मनपर्छ -महेश बस्नेत, अध्यक्ष, युवा संघ नेपाल
Europe Nepal Wednesday, April 9, 2014
युवा संघको धुलिखेल बैठक त असाध्यै विवादास्पद भयो नि ? Youth Union, the very controversial meeting was about Dhulikhel? - विवादास...
युवा संघको धुलिखेल बैठक त असाध्यै विवादास्पद भयो नि ?
Youth Union, the very controversial meeting was about Dhulikhel?
- विवादास्पद भन्दा पनि चर्चित भो । गृहमन्त्रीले बोलेको कुरालाई मिडियाले अलि फरक ढंगले उठायो । उहाँले प्रहरी प्रशासनको चेन अफ कमाण्डको कुरा गर्नुभएको थियो । तर, चाकडी भन्ने अर्थमा बाहिर आयो ।
Also discussed the most controversial bho. Issuing words of the media raisedaslightly different manner. He was the police administration to the chain of command tours. However, neither the sense that came out.
धुलिखेल बैठकबाट कारबाहीमा परेका शेरबहादुर तामाङले महेश बस्नेतले टेबलमा पेस्तोल राखेर मलाई कारबाही गर्‍यो भनेका छन् । त्यस्तै भएको हो ?
Small meeting of police Mahesh Bahadur Basnet table pistol keeping Tamang said I run prosecutions. Has the same?
यस्तो हास्यासपद कुराको जवाफ दिएर साध्य हुँदैन । युवा संघ नेपालका २ सय ३५ जनाको पूर्ण सदस्यको बैठक हो । त्यसमा युवा संघका नाममा अराजकता सिर्जना गर्ने, अपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने व्यक्तिलाई हामीले यसपालि निस्काशन गरेका हौं ।
उनीहरु अपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएकै हुन् त ?
उहाँहरुले पटक-पटक अराजक गतिविधि देखाउनुभएको थियो । संगठनका साथीहरुमाथि हातपात गर्ने, महिलाहरुलाई दुव्र्यवहार गर्ने, कार्यालयमा अपशब्द बोल्ने, माक्र्स, लेनिन र मदन भण्डारीका फोटोहरुलाई ट्यापेका फोटो भन्नेदेखि धेरै कुरा छन् । युवा संघका नाममा विभिन्न आर्थिक लेनदेनमा संलग्न भएका कुराहरु आएका छन् ।
हामीले झपड रावलको नेतृत्वमा आयोग बनाएका थियौं । त्यो आयोगले सच्चिन चाहेकाले एकपटक मौका दिने भनेको थियो । तर, योपटक जो-जो कारबाहीमा पर्नुभो, उहाँहरुबाहेक सबैको सर्वसम्मत निर्णय भएको हो । निस्काशित मान्छेहरुले अलिअलि रिस आक्रोस पोख्नु स्वभाविक हो ।
गृहमन्त्रीको भनाइ मिडियाले बेग्लै ढंगले उठायो भन्नुभयो, तर एसएसपी खरेलले मलाई भेट्न आएन भनेर गृहमन्त्रीले गौतमले बोलेको त भिडियो नै छ नि ?
- त्यो भनेकै हो । उहाँले के भन्नुभएको हो भने सिंहदरवार र हनुमानढोका नजिकै छ । तर, मलाई भेट्न आउँदा आफ्नो सम्मान गिर्छ भन्ने लागेको छ उहाँलाई । तर, एउटा प्रहरी अधिकृतले जनतिनिधिमूलक निकाय, सरकार र आफूभन्दा माथिल्लो निकायलाई नमान्ने हो भने च्यानल भत्किन्छ । सेलीब्रेटी बन्ने एउटा व्यक्ति त हाइलाइट होला तर, सिंगो प्रहरी फोर्सभित्र समस्या ल्याउँछ भनेर उहाँले भन्नुभएको हो ।
चेन अफ कमाण्ड अनुसार त एसएसपीले गृहमन्त्रीलाई भेट्दैन । आफ्नो हाकिमलाई मात्र भेट्छ हैन र ?
- उहाँ (रमेश खरेल) का माथिल्ला अधिकृतहरुको पनि गुनासो छ । उहाँहरु बाहिर बोल्न चाहन्नु हुन्न । अझ भनौं पूर्वएआईजी रमेश श्रेष्ठ, जसले आफ्नो जीवनको उर्जाशील समय प्रहरी संगठनमा बिताउनुभो, उहाँलाई खरेलले गलहत्याएर निकाल्नुभो ।
पत्रकारहरु लगेर मोडलको स्टाइलमा कुर्सीमा बसेर औंला ठ्याएर फोटो छापेर फेसबुकमा आफ्नो पैरख देखाउनु भो । यी सबै कुराले उहाँ चेन अफ कमाण्ड तोडिरहनु भएको छ भन्ने हो ।
खरेलले चेन अफ कमाण्ड नमानेको भए त गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रमुखलाई पो भन्ने हो । त्यसरी पार्टीको युवा संगठनलाई भन्ने हो त ?
- वामदेव गौतम एमालेका नेता पनि हुन् । उहाँले कार्यकर्ताको रुपमा बोल्नु भएको हो । वामदेवले सार्वजनिक रुपमा भनेको होइन । कार्यकर्ताहरुबीचमा भनेको कुरा हो ।
अब मिडियाले पनि कुन ठाउँमा बोलेको ?
भन्नेतिर ध्यान दिने हो कि जस्तो लाग्छ मलाई ।
अझ हामीलाई लागेको कुरा के हो भने अच्युतकृष्ण खरेल आईजीपी हुने कुरामा वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा विविध कारणले एक स्टेप पछाडि गयो । आज उहाँसँग टचमा भएका मान्छेहरु सुशील कोइरालाले नचाहँदा नचाहँदै गृहमन्त्री हुनु भो भन्ने मनोविज्ञानमा टेकेर उहाँलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गर्दैछन् कि भन्ने आभास भएको छ ।
हिजो खिलराज रेग्मीको सरकार हुँदा प्रहरी प्रशासन ८/९ महिना नेतृत्वमा आयो र उसले के बिर्सियो भने हामीभन्दा माथि जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छ । लोकतन्त्र भनेको जनताको सार्वभौम अधिकार भएको व्यवस्था हो । एउटा गृहमन्त्रीको मातहत पुलिस प्रशासन रहने कि पुलिस प्रशासनको मातहत गृहमन्त्री भन्ने बहस गर्न खोजिँदैछ यो भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था मान्ने कि नोकरशाही व्यवस्था मान्ने भन्ने हो ।
रमेश खरेलले तपाईहरुका कार्यकर्तालाई पक्राउ गरे । त्यही भएर तपाईहरु खरेलविरुद्ध उत्रिएको आरोप छ नि ?
-आरोप त जे लगाउँदा पनि हुन्छ । विशेष गरेर अमित लामाको केस होला । मैले त अमितलाई छोड्नुपर्छ भनेर कहीँ भनेको छैन ।
तर, एउटा मान्छेलाई गिरफ्तार गरिरहँदा उसको घर व्यवहार, समाजिक जीवन पनि त हुन्छ । उसलाई मुद्दा लगाउनुपर्‍यो, पुष्टि गर्नुपर्‍यो । त्यतिकै समाएर सार्वजनिक मुद्दा लगाउने अनि २०/२५ दिन थुनेर देखाइदिन्छु भनेर एउटा डीएसपीको भाइसँगको इबीका कारण समाउने अनि हनुमानढोकामा राखेको मान्छेलाई फुर्ती लगाउने भनेर दरबारमार्गमा लैजान मिल्छ ?
को डीएसपीको भाइसँग विवाद भयो ?
-राजकुमार सिलवाल भन्ने डीएसपीका भाइले १५/२० जना आएर अमितको रेस्टुरेन्टमा खाना खाए । पैसा तिर्दिन, मेरो दाइको पावर देखाउँछु भनेर पाँच/सात दिन अगाडि विवाद भएको र त्यही केसमा ल्याएर थुन्नुभएको छ भन्ने अमित जीको कुरा छ । डीएसपीसँग कुरा गर्दा र केस के छ भन्दा केही छैन । कारण पुष्टि गर्नुभएको छैन । जे पनि हुनसक्छ, रहस्यमय छ भन्नुहुन्छ । हामीले के भनेका छौं भने समाउनुस् तर भोलि पुष्टि गर्नुस् ।
केही मान्छेले त महेश बस्नेतले वामदेवलाई त्यस्तो बोल्न उकासेर फसाएको भन्ने गरेका छन् नि ?
-त्यस्तो होइन । वामदेव मुलुकको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री हुनुहुन्छ र सरकारमा एमालेको नेतृत्व गर्नु भएको छ । हाम्रो एमालेको रोग के हो भने जिम्मा दिने तर, संरक्षण नगर्ने । वामदेवमाथि आरोप लाग्दा अहिले एमालेका केही नेता बोल्दैनन् । हिजो माधव नेपालमाथि अनेकखालका आरोप लाग्यो तर, खास मान्छेहरुले डिफेन्स गरेनन् । हिजो अर्थसचिव रामेश्वर खनालले राजीनामा दिँदा भरतमोहन अधिकारीमाथि अनेक टिप्पणी भयो । कालान्तरमा यी विषयहरु प्रमाणित भएनन् ।
म पार्टीको इमान्दार कार्यकर्ताका हिसाबले पार्टीले जिम्मेवारी दिएर पठाएका नेताहरुको पनि सेभ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो । कार्यकर्ताको डिफेन्समा त एक नम्बरमै छु ।
EuropeNepal.Net: मलाई रमेश खरेलको ‘एक्सन’ मनपर्छ -महेश बस्नेत, अध्यक्ष, युवा संघ नेपाल